Ifektri Yezinja - Abakhiqizi bezinja baseChina, abahlinzeki
I-GPS Tracker / Inja / GT-D01
Le modeli yenja yemodeli ye-GPS isebenza ukubeka indawo yezinja nokuphathwa kwansuku zonke. Ungumsizi omuhle wokugcina izinja. Kuyizinsuku ezinhlanu zokubekwa okude, kukushiyele isikhathi esanele sokuthola izinja zakho, kusekelwe kubuchwepheshe be-GPS obuningi be-GPS + WIFI + LBS obunikeza ngokunembile ukuthola ukunemba kwe-20m yasendlini nangaphandle komnyango we-200m. Futhi uzibekile izicingo zikagesi, uma nje izinja ziphuma ocingweni kuzoxwayisa. Uma ufuna ukunika izinja inkululeko, khona-ke i-GPS tracker iyadingeka impela ukuthi ngeke ilahleke.
Uma kukhona i-WIFI ngaphakathi, lungisa indawo ngokunembile, ungadingi iphasiwedi bese uxhumanisa ngokuzenzakalela i-WIFI eseduze yokumisa, eminyango yethu, i-American GPS ibekwe ngokunembile njengokuzulazula kwefoni ephathekayo, uma ingekho i-WIFI ngaphakathi, shintsha i-othomathikhi base station positioning, isilwane ngeke silahleke.
Ibanga lamanzi okubhukuda, inja iba manzi imvula bese igxumela echibini lokubhukuda nawe ngokungazi ngokudlala, ungesabi, amanzi ngeke angene ngaphakathi. Ungakhathazeki ngokuthi i-tracker iphukile lapho inja idlala futhi ichaphaza amanzi noma iba manzi emvuleni.
Uma uhamba nenja ebusuku, ungakhathazeki ngokuthi awukwazi ukubona ukuthi kude kangakanani nenja ebumnyameni. Sebenzisa kuphela umsindo wesilwane nokukhanya okufunayo ku-APP, ungazizwa lapho inja inomsindo okhanyayo +. Isipikha esikhulu sevolumu, sebenzisa isipikha esikhulu sevolumu esingenisiwe esinhlanu, umsindo wakho usengazwakala ngokucacile isilwane esimweni esinomsindo ongaphandle. Impucuko ayidingi ukumemeza nokuphazamisa abanye, ungathumela izwi ngokudayela noma nge-APP ukukhuluma amagama esilwaneni sakho, idivaysi izodlala ngokuzenzakalela izwi lesilwane.
Ukuqapha izwi kude, lapho ufuna ukwazi isimo esizungezile senja, thumela umyalo owodwa weklayenti leselula, iwashi liphakela buthule isimo sezwi elizungezile kuwe uma kungekho ukusabela.
I-GPS Tracker / Inja / GT-D02
Le modeli yenja ye-GPS tracker eyokubeka indawo yezinja nokugcinwa kwansuku zonke. Kuyizinsuku ezinhlanu zokubekwa okude, futhi kusekelwe ekubekweni kwe-tech GPS + WIFI + LBS okunika amandla ukuthola ngokunembile i-20m yasendlini nangaphandle komnyango wama-200m. Futhi ungasetha uthango lukagesi, i-APP izokwazisa uma izinja ziphuma ezicijile. Uma ufuna ukunika izinja inkululeko, i-tracker enjalo ye-GPS iyadingeka impela ukuthi ngeke ilahleke.
Ukungenwa ngamanzi okujulile, noma ngabe akunankinga uma izinja zibhukuda, ngakho-ke ayikho imvula yokukhathazeka namanzi acwebezelayo. Isipikha esikhulu sevolumu, sebenzisa isipikha esikhulu sevolumu esingenisiwe esinhlanu, umsindo wakho usengazwakala ngokucacile isilwane esimweni esinomsindo ongaphandle. Impucuko ayidingi ukumemeza nokuphazamisa abanye, ungathumela izwi ngokudayela noma nge-APP ukukhuluma amagama esilwaneni sakho, idivaysi izodlala ngokuzenzakalela izwi lesilwane.
I-GPS Tracker / Inja / i-GT-D03
Le modeli GPS tracker isebenzela ukubeka izinja, futhi ingasebenzela ezinye izimpahla nezikhwama. Kususelwa kubuchwepheshe besikhundla se-GPS + AGPS, singathola ngqo endaweni engu-5-10m, sigweme izilwane ezifuywayo nokulahleka kwempahla. Ingasetha i-Geo-fence futhi izokwazisa kanye ngaphandle kocingo ukwenza ukwazi ukuphepha.
Inamandla amakhulu webhethri nemodi yokonga amandla, etholakalela isikhathi sokulinda izinsuku eziyi-15, isikhathi esanele sokuthola. Futhi kungumsebenzi wokujula kwamanzi ajulile, akukho ezifuywayo ezikhathazayo ezidlala ngamanzi. Kuyithuluzi lomndeni eliwusizo impela lokulwa nokulahlekelwa.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Isitshalo sikhule ukukhanya, Khulisa i-Lightin, Khulisa ukukhanya,